Buy Jewel Residence For Rent and Sale (ID-681) (27Lks) in Yankin on ipivi.com
Jewel Residence For Rent and Sale (ID-681)
Seller: Angel Real Estate
Active on site: 74 days
Views: 101 (+1)
Type of property Apartments, Flats
Offer type For rent
Jewel Residence for rent and sale, located in Yankin Township. Living area - 3000 sqft , organized by Living-room, Three Master Bed-rooms, One Single Bed-room,Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Residence has Fully furniture, five air-conditioners and Gym.
Rent Price - 2300 USD (Nego)
Sale Price - 3600 Lakhs (Nego)
We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.
English Language: 09792444317
ငှားရန်နှင့်ရောင်းရန်ရှိသော Jewel Residence မှာရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခန်းအကျယ် - ၃၀၀၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် သုံးခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ လေအေးပေးစက်ငါးလုံးနှင့် Gymများ ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။
ငှားရမ်းခဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ (ညှိနှိုင်း)
အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၃၆၀၀ (ညှိနှိုင်း)
ငှားရန်နှင့်ရောင်းရန်ရှိသော Jewel Residence (ID-681)
အထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများသည် ပိုင်ရှင်များ၏ခေါ်ဈေးနှုန်းများသာဖြစ်သောကြောင့် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
When you call, don't forget to mention that you found this ad on ipivi. I do not wish to be contacted by telemarketers or representatives of any other website.
Does not provide this service
Phone number or links in description
Unable to get in touch
Ad creator is incompetent or rude
Stolen photos or description
Only authorized users can report an ad. Please Login
Availableabrand new and nice P...
Yawmingyi Apartment For Rent
When you call, don't forget to mention that you found this ad on ipivi.
Name: Jewel Residence For Rent and Sale (ID-681)
Yangon Region , Yankin
Active on site 74 days